Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4.1.2 formation Friendship ka mid ah ardayda
Cilmi isticmaalo Guda email iyo diiwaanka maamulka si ay u fahmaan formation saaxiibtinimo. Cilmi waxay u baahan tahay qabashada incompleteness xogta weyn.
Xaaladaha badan, cilmi aan nasiib ku filan oo ay wax walba in ay doonayaan si toos ah u soo ururin meel kaliya. Laba dhibaato badan waxay kala yihiin macluumaad aan dhammeystirneyn oo ku saabsan dadka iyo jaanqaadayn u dhexeeya dhista af iyo xogta. Labada ka mid ah dhibaatooyinka ka mid ah ayaa ka hadlay Kossinets iyo Watts (2009) oo qayb ka ah dadaalka ay tahay in la fahmo sida ay bulshada shabakadaha ahaan umuuruhu.
Ku dhowaad hadlayay, cilmi qabaa in horumar network bulshada la eryay by saddex muuqaalada: 1) qaab-dhismeedka xiriir jiray 2) hawlaha la wadaago (tusaale ahaan, Qolal, fasallada) iyo 3) tirada bulshada. Fahamka udhaxeeya u dhexeeya, kuwaas oo saddex arrimood waxay u baahan tahay xogta network gaadhya weheliso macluumaadka ku saabsan tirada bulshada iyo hawlaha shaqsiyaadka '. waxbarashada Horaantii lahaa qaar ka mid ah waxyaabahan, laakiin ma jiro lahaa saddex dhan.
Kossinets iyo Watts bilaabay in ay cilmi-by isuna Guda email ka jaamacad weyn. Si kastaba ha ahaatee, abuse email, kuwaas oo keliya ayaa dhamaystirnayn, iyagu ma waxaa ka mid ah wax walba oo loo baahan yahay in la fahmo arrimaha kala duwan wadista horumar network. Sidaa darteed, Kossinets iyo Watts biireen Guda email kuwan, iyadoo labo ilo kale oo aad macluumaad: xogta dadka ururiyay by ee jaamacadda iyo macluumaad ku saabsan hawlaha la wadaago (tusaale ahaan, macluumaadka joogitaanka ardayga iyo liis dhamaystiran oo diiwaangelinta koorsooyinka). Marka saddexdan ilaha macluumaadka, kuwaasoo mid walba uu ahaa dhamaystirnayn, waxay isu soo wada biireen Kossinets iyo Watts lahaa dhisme xogta awood for horumar network waxgarasho.
Laakiin, waxaa ka mid ahaa tartan final in ay lahaayeen in ay ka gudbaan. Kossinets iyo Watts doonayay in ay bartaan sida shabakada bulshada ee jaamacadda si fartaan ay u baahanyihiin si ay u isticmaalaan Guda email galay qiyaasta ahaa oo ku xiran kuwaas oo ahaa wakhti. Sida laga wada hadlay in horay (Qaybta 2.3.2.1), noocan oo kale ah operationalization ee dhista teori waa caqabad weyn marka la isticmaalayo raad digital cilmi bulsho. In dhamaadka, Kossinets iyo Watts go'aansaday in laba qof ayaa loo arkaa ku xiran waqtiga \_ (t \_) haddii oo kaliya haddii ay is dhaafsadeen emails (\_ (i \_) saxafadeed \_ (\_ j) iyo \_ (\_ j) saxafadeed \_ ( i \_)) ee la soo dhaafey 60 maalmood. doorashooyin ma aha ahaayeen sabab lahayn; waxay ku salaysan tahay tixgelinta taxaddar of goob this taaban karo, iyo Kossinets iyo Watts hubiyaa in natiijada waxay ahaayeen adag in xulashadooda. Guud ahaan, haddii aad ku lug leedahay operationalization doorashada qaar ka mid ah oo gaar ah cutoffs-dhihi 60 maalmood halkii ay 30 maalmood ama 90 maalmood-waa fikrad fiican in la hubiyo in natiijada aan u nugul yihiin doorashada this.
Marka Kossinets iyo Watts qabto dhibaatada ay keentay incompleteness (tusaale ahaan, la waayay xogta dadka, maqan macluumaad ku saabsan hawlaha la wadaago, iyo la'yahay dhista teori), waxay lahaayeen xogta in u sahlay in ay fahmaan saddex ciidamada ugu weyn in baabuur wadi karto horumar network: 1) qaab dhismeedka xiriir jiray 2) hawlaha la wadaago (tusaale ahaan, Qolal, fasallada) iyo 3) tirada bulshada. Joogtaynta cilmi hore, waxay heleen in dadka tirakoobka la mid ah waxay u badan tahay in ay sameeyaan xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, ka duwan waxbarashada hore, waxay heleen in qaabkani ayaa si xoogan yarayn by qaab dhismeedka hadda jira network iyo hawlaha la wadaago. In si kale loo dhigo, hannaankii in cilmi horaantii arkeen waxaa qayb ahaan sharaxay by xogta in cilmi hore ma lahayn. Sidaas darteed, by si guul leh incompleteness xogta ay ka qabashada, Kossinets iyo Watts ay awoodaan caddeeyo dhexgalka ee kala duwan ee arrimaha kala duwan in la wado evolutions network bulshada.